Wakiil su'aalo ka qabaa sida ay Chelsea ku heli karto saxiixeeda cusub ee Ziyech 1da JUly - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Wakiil su’aalo ka qabaa sida ay Chelsea ku heli karto saxiixeeda cusub...
Wakiil su’aalo ka qabaa sida ay Chelsea ku heli karto saxiixeeda cusub ee Ziyech 1da JUly
Wakiilka agu magcaabo Martin Reilly ayaa su’aal ka keenay sida ay Chelsea u maareyn doonto heshiiskooda kaga imaanaya Ajax Hakim Ziyech.
Ziyech ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Chelsea 1da July – laakiin imaanshihiisa ayaa mugdi galaya haddii xilli ciyaareedka Premier League uu dhaafo ilaa 30ka Juun.
Reilly ayaa u sheegay wargayska Daily Record: “Naadiyada badankood hada waxay leeyihiin ciyaartoy ay kaga baahan yihiin suuqa.
“Chelsea waxay soo ibsatay Ziyech bishii Febraayo iyadoo fikirka ah inuu yimaado 1da july shaki la galinayo.
Haddii xilli ciyaareedkaan dib loo dhigo waad qiyaasi kartaa inaan loo ogolaan doonin inuu baxo, madaama Ajax markaas ay dooneyso inuu sii joogo oo uu la dhameysto xili ciyaareedka.
Previous articleXubno kasoo horjeeday doorashadii Galmudug oo gaarey Dhuusamareeb
Next articleBarcelona oo hogaanka u qaadatay saxiixa xiddig ay bartilmaameed ka dhigatay Chelsea
Ciyaaryahano diidey inay dhimaan mushaarkooda
Liverpool Oo Gebi Ahaanba Loo Diidi Doono Inay Ka Qayb-gasho Champions League
PSG Oo Jawaab Ka Bixisay Dalabkii Barcelona
Alessandro Del Piero Oo Soo Doortay Afarta Ciyaartoy Ee Ugu Wanaagsan Dunida Waqtigan